Murairidzi WeChikwata CheDynamos David Mandigora Vosiya Basa
Murairidzi wechikwata cheDynamos, vaDavid Mandigora, vasiya basa nhasi mushure mekusatamba zvakanaka kwechikwata chavo mumitambo yePremier Soccer League yemwaka uno. VaMandigora vaudza Studio7 kuti vatonyora tsamba yekuregedza nhasi uye vatoudza hutungamiri hweDynamos.
Panga pane mashoko ekuti hutungamiri hweDynamos hwanga hwakaronga kudzika vaMandigora, sezvo hutungamiri uhu hwanga husiri kufara nematambiro ari kuita Dynamos kubva pakatanga mwana wenhabvu gore rino. Studio7 haina kukwanisa kubata hutungamiri hweDynamos kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
VaMandigora vanoti vane chivimbo chekuti zvinhu zvichagadzirika muchikwata ichi kunyange hazvo dynamos isiri kuita zvakanaka mumitambo yePremier Soccer League pari zvino. VaMandigora, avo vakatambira dynamos kwemakore vakawanda, vakakwanisa kubatsira chikwata chavo kuti chitore mukombe wePremier Soccer League makore maviri apfura, uye vakakwanisa kuti chikwata ichi chipinde mumakwikwi eAfrica Champions League gore rapera.
Marvellous Mhlanga-Nyahuye weStudio7 aita hurukuro navaMandigora kuti tinzwe zvizere nemamiriro akaita zvinhu muDynamos.
Hurukuro NaDavid Mandigora